बिहु घोँडाबाँधेको भ्यूटावरमा दृश्यावलोकन गर्नेहरुको संख्यामा बृद्धि ! – ebaglung.com
बिहु घोँडाबाँधेको भ्यूटावरमा दृश्यावलोकन गर्नेहरुको संख्यामा बृद्धि !
२०७३ चैत्र १८, शुक्रबार १५:३८	Top News, अन्य समाचार
भरत सापकोटा, बागलुङ, २०७३ चैत १८ । मध्यपहाडी लोकमार्गको स्तरोन्नति भएसँगै बागलुङको बिहु र दुदिलाभाटीको सीमाना थामानेटामा रहेको भ्यू टावरमा पुग्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढेको छ ।
केन्द्रको ७ लाख तथा नेपाल पर्यटन बोर्डको २ लाख ७५ हजार गरी ९ लाख ७५ हजार रुपैयाँको लागतमा टावर निर्माण गरिएको निर्माण समितिका अध्यक्ष मेहन्द्रप्रसाद कँडेलले बताए । बिहु तथा गल्कोट क्षेत्रको घोँडाबाँधे धुरीमा रहेको टावरबाट धौलागिरी, माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण लगायतका हिमशृङ्खला सहित चुरे पर्वत देख्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी गुल्मी र कास्कीसँगै गल्कोटका सबै क्षेत्र यो टावरबाट देख्न सकिन्छ । लोकमार्ग भएर यात्रा गर्नेहरु मात्र नभई हिउँदको समयमा पिकपिकका लागिसमेत यहाँ ठूलो संख्यामा मानिसहरु पुग्ने गरेका छन् ।
२०६८ सालमा जिल्ला विकास समितिअन्तर्गतको ग्रामीण पहाडी पर्यटन प्रवर्द्धन तथा विकास केन्द्रको सहयोगमा निर्माण गरिएको टावरबाट सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न पर्यटकहरु पुग्ने गरेका हुन् । पर्यटन बिकासको सम्भावना नै हेर्ने हो भने त्यस क्षेत्रमा पाईने पाँच प्रकारका लालिगुरासका फुलहरुका साथै बह्मलीन स्वामी श्री १००८ परमान्नद सरस्वती महराजको तपोभूमि शिवधुरीमा जीर्ण अवस्थामा रहेको मन्दिर पुनर्निर्माण गर्ने र त्यस ठाँउबाट घुम्टेलेक त्यस्तै अन्य हिमश्रृंखला देख्न सकिने हुँदा त्यसको लागि भ्युटावर हुदै शिवधुरीजाने पदमार्गको निर्माण गर्नुपर्ने स्थानियको भनाई छ ।
त्यस जंगल भित्र पाउने बिभिन्न किसिमका जंगली जानवर जस्तै मृग, कालिज चितुवा, भालु स्याल खरायो खुदे लोखर्के जस्ता जनावहरु लाई संरक्षण गर्ने हो भने पर्यटन विकासमा अर्कों इट्टाथप्न सकिने स्थानियको विश्वास छ । त्यस जंगलमा बिभिन्न किसिमका जटिबुडिहरु जस्तै सिल्टिमुर सतुवा हाडचुरन लगायत अन्य जडिबुटीहरु पाईने हुनाले जडिबुटीहरुको प्रचुर सम्भावना भएको ७७ बर्षिय लालबहादुर सापकोटाले बताए।
सहकारी दिवसमा मानब सेवा आश्रमका लागि उपभोग्य सामाग्री हस्तान्तरण !
‘सम्बृद्ध गल्कोटका लागि विकासमुखी पत्रकारिता’ नारा सहित पाँच दिने तालीम सुरु !